Aretin' ny nofon'ny fo
Naseho ny : 2 oktobra 2021
Ny aretin'ny nofon'ny fo dia fahatsentsenan'ny lalan-dra, izay mamelona ny fo, ary mahalo ny nofo mandrafitra ny fo. Isan'ny antony mahatonga ny aratin'ny nofon'ny fo ny fahasimbana na fahatsentsenan'ny lalan-dra noho fikorontanan'ny "cholesterol". Amin'ireo tratry ny aretin'ny nofon'ny fo dia lehilahy ny 60%. Manafaigana ny ahazoana io aretina io ny fifohana sigara, fisotroana toaka, tsy ampy fihetseham-batana, mitaitaindava, ny tosi-dra. Fambara : marary ny faritra ambadiky ny ivon'ny taolan-tratra...
Naseho ny : 25 septambra 2021
Ny 21 septambra no fanamarihana ny andro eran-tany ho an'ny aretina alzheimer. Tamin'ny taona 1906 no nahitan'i Dr Aloïs Alzheimer, ity aretina ity ary nampitondrainy ny anarany. Ny Aretina alzheimer dia vokatry ny fahasimban'ny sela ao amin'ny faritra maromaro ao amin'ny atidoha ary misy akony amin'ny fiasany. Ny salan-taonan'ny olona mety ho tratry ny aretina dia eo ho eo amin'ny 65 taona eo.
Naseho ny : 18 septambra 2021
Ny aretina pesta dia efa nisy teto ambonin'ny tany 20 000 taona lasa izay, fa tamin'ny taona 1894 kosa vao fantatra mazava tamin'ny alalan'ny fikarohana nataon'i Dr Alexandre Yersin. Tamin'ny taona 1898 no tafiditra teto Madagasikara ny peste noho ny fidiran'ny olona nararin'ny pesta avy any ivelany tamin'ny alalan'ny sambo...
Takaitra noho ny Covid-19
Naseho ny : 11 septambra 2021
Ny Covid-19 dia valanaretina nahakasika firenena maro ary namoizana aina. Mety hakasika ny taovana rehetra ao anatin'ny olombelona iray ny Covid-19. Misy foana ny takaitra noho ny Covid-19 amin'ny olona izay nolalovany...
Pejy 7 amin'ny 17